Ogaden News Agency (ONA) – Hadaad ii keento Warbaahin aan Damiir lahayn, waxaan ku keeni shacab aan Garaad lahayn
Hadaad ii keento Warbaahin aan Damiir lahayn, waxaan ku keeni shacab aan Garaad lahayn
Posted by ONA Admin	/ January 13, 2014
Erayadaa waxaa yidhi Gobles oo ahaa Wasiirkii warfaafinta ee Hitler. Ninkan waxaa loo aaneeyaa inuu dajiyay qaabka dacaayadda casriga ah loo sameeyo oo loogu talagalay in shacab loogu jahawareeriyo oo loogu jaheeyo dhanka lala rabo. Waxaa kaloo ka mid ah ereyada laga hayo Mr. Gobles; Been weyn ood sheegtay hadaad ku soo celceliso ugu dambaynta dadweynaha way rumaysan .. (If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it.) .. isagoo sii wata ayuu daba dhigay; waa inay dawladda adeegsataa awoodeeda oo idil si aanay runta u soo bixin sababtoo ah buu yidhi runta waa cadawga beenta, taasoo macnahedu yahay buu yidhi inay tahay Runta cadawga ugu weyn ee dawladda (..for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.)
Somalida inkastoo aanay aqoonin waxa la yidhaahdo dacaayadda, beentana ay ka ahayd agtooda ceeb xaaraan ah, hadana waxay ku fahmeen caqliga iyo tajaaribta ay soo mareen maahmaahda ah – Been fakatay Runi ma gaadho. Sidaa daraadeed ayay ku dadaali jireen inay durbadiiba ka hortagaan beenta oo siday yidhaahdeen Halka lugee ay ku boodo beentaa ay soo qabtaan.
Xukuumadaha kali-taliska macangaga ah waxay u adeegsadaan beenta sidaa uu sheegay Mr. Gobles ee loogu talagalay in shacabaka lagu jaheeyo, runtana lagula dagaalamo. Itobiya waa dawladda 1aad Afrikada Saxaraha Ka-hooseeya (Sub-Sahara Africa) ee miisaaniyadda ugu badan ku bixisay sanadihii tagay dacaayadda iyo been-abuurka. Dad badan oo aqoon leh ayaa ku dooda inay dawladaha caalamka oo idil adeegsadaan dacaayadda oo aanay ahayn mid ku kooban dawlad kali ah, hasa ahaatee dawladda markay ay la dagaalanto wararka kale ee ka soo horjeeda iyo kuwa dhex-dhexaadka ahba oo go’aan siyaasi ah uu noqdo in la cabudhiyo codka ka soo horjeeda midka dawladda ee beentii ay sheegtay dadweynaha u muujin lahaa, waxaa soo baxaya inay dawladaasi siduu sheegay Mr. Gobles u aragto runta cadawgeeda 1aad (the truth is the greatest enemy of the State) oy la dagaalamayso.
Sanadkii 2009 waxay xukuumadii Meles Znawi ka saxiixday baarlamaanka Itobiya sharci ay ku magacawday La-Dagaalanka Argagixisada oo caalamka oo idil laga cambaareeyay, sababtoo ah ujeedada 1aad ee sharcigaa loo dajiyay wuxuu ahaa in lagula dagaalamo Saxafiyiinta kuwa gudaha iyo kuwa dibadaba, oo ka dhigan waxay dawladda Itobiya ka sheegto ururada 4ta ah ee lagu shaabadeeyay argagixska wax ka duwan qofkii sheega wuxuu noqonayaa qof taageeray Argagixska, waxaana qabanaya sharcigaa la dajiya. Wuxuuna ahaa qodobkii loo cuskaday labadii wariye ee Sweden.
KT Meles zanawi markuu sharcigaa dajinayay wuxuu si dhab ah isha ugu hayay halganka shacabka S.Ogadenya iyo ururka JWXO, waxayna ahayd waqtigii uu xisbiga TPLF u cabsaday xukunkiisa sida ku qornayd waraaqihii ay isu dirayeen dhexdooda ee wikileaks lagu soo daabacay.
Itobiya waxay dajisay qorshe dacaayadeed oo lagula dagaalamo ONLF oo ka kooban dhowr qodob.
1- In codka ONLF aan laga maqlin gudaha Ogadenya oo tashwiish lagu furo idaacadaha iyo TV-yada ururka (RX iyo Ileys), lagana xidho dalka shabakadaha ku hadla afka halganka.
2- In been aan cidna kadaba tagi karin lagu qarqiyo dhagaha shacabka, gaar ahaan kuwa dibadaha jooga oon indhahooda ku arki karin xaaladda dhabta ah ee ka jirta Ogadenya.
3- In shacabka si naxariisdarra al loo ciqaabo kadibna laga soo saaro TV-ga Itobiya oo markii ugu horeysay taariikhda lagaga hadlo Af-Somali, iyagoo wixii loo sheegay ku hadlaya.
4- In TV-yada soo badanaya ee Somalida lagu qasbo inay joojiyaan wax kasta oo ku saabsan ONLF, midkii diidana laga saaro hawada sidii ku dhacday Somali-Chanel TV. Qaarkoodna lagu iibsado lacag uu isaga bixiyo kirada satellite-ka sida UnvTV.
Hadafka ugu dambeeya ee Itobiya ay ka leedahayna waa inay hesho shacab Somaliyeed oon wacyi lahayn oo sidii uu sheegay Mr. Gobles kolba dhankii la rabo loo kaxaysto.
Nasiibdaro, qaar badan oo Somali ah ayaa dabinkaa ku dhacay, ama ha ahaaden kuwii Jamhuuriyadda ahaa ama ha ahaadeen kuwa sida tooska ah ugu hoos jira Gumaysiga Itobiya. Qaar badan ayaad arki oo kugula soo kalahaya wixii uu ka soo arkay TV-ga Itobiya oo waqti badan ay kaa qaadan inaad ka shubto beentii lagu shubay.
Q2aad waxaan kaga hadli doonaa habkii looga hortagi lahaa Doqomaynta (Fooling) shacabkeena.